Boky Audio “Tompo O, Fa Aiza Ianao?!” - Cloud Library
Accueil - Audio - Boky Audio “Tompo O, Fa Aiza Ianao?!”
Ampitaina Mivantana Boky Audio “Tompo O, Fa Aiza Ianao?!”
Mandefa Fampidirana (6 MB)
Mandefa Toko 1 (24 MB)
Mandefa Toko 2 (21 MB)
Mandefa Toko 3 (21 MB)
Mandefa Toko 4 (29 MB)
Mandefa Toko 5 (36 MB)
Mandefa Toko 6 (24 MB)
Mandefa Toko 7 (37 MB)
Mandefa Toko 8 (36 MB)
Mandefa Toko 9 (30 MB)
Mandefa Toko 10 (32 MB)
Mandefa Toko 11 (31 MB)
Mandefa Toko 12 (51 MB)
Boky Audio “Tompo O, Fa Aiza Ianao?!”
Manovo Hery & Feno Fahavononana any Amin’ny Tany Efitra
Mahatsapa tena ho very ve ao anatin’ny fotoan-tsarotra ve ianao, ka manontany tena hoe “TOMPO O, FA AIZA IANAO?!”
Angamba ianao efa nandre an’Andriamanitra niteny, nefa toa mangina izany Izy izao. Angamba efa nandeha tamim-pinoana ianao, saingy ankehitriny dia tsy hita popoka intsony ny fanatrehany. Tonga soa aty amin’ny tany efitra ianao — io dia eo anelanelan’ny fandraisanao ny teny fikasana, sy ny fahatanterahan’izany hitan’ny masonao.
Saingy izao no vaovao mahafaly — io dia tsy tany foana tsy misy tanjona akory. Ny tany efitra dia ampiasain’Andriamanitra mba hanomanana anao ho amin’ny anjara voatendry — izany tokoa io raha tena hainao ny mandalo azy. Ny famakivakianao io vanim-potoana io dia tsy resaka fiandrasana an’Andriamanitra fotsiny, tahaka ny fieritreretan’ny maro azy. Fa ianao dia manana anjara lehibe sahanina amin’ny fahatafitanao izany. Ka raha tsy tianao ny handany fotoana ka ho voan’ny tamberin-tany any dia zava-dehibe ny fahafantaranao hoe inona tokoa ny tany efitra.
John Bevere dia mpanoratra boky be mpividy indrindra ka amin’ity boky mahazendana ity no anomezany famatsiana anao miaraka amin’ireo fanambarana avy ao amin’ny Baiboly sy karazana tantara mahavariana izay hanampy anao ho afa-mandingana ny fotoan’ny fahamainana sy fahasarotana eo aminao ka hiditra indray amin’ilay zavatra izay efa nomanin’Andriamanitra ho anao.
Download ny rakitra rehetra: ~362.31 MB
Tompo O, Fa Aiza Ianao?!
Audio Fampianarana “Tompo O, Fa Aiza Ianao?!”